Sannad kadib dilkii ka dhacday Vårväderstorget Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ubax tacsi ah oo la dhoobay meel u dhow maqaxidii rasaasta lala dhacay ee dadka ku dhinteen. Foto: TT
Sannad kadib dilkii ka dhacday Vårväderstorget Göteborg
"Weli rasaastii baa maskaxdeyda ka sii guuxeysa"
La daabacay fredag 18 mars 2016 kl 15.30
Muddo hal sanno ah ayaa ka soo wareegtay xabadeyntii ka dhacday maqaaxi ku taala Vårväderstorget xaafadda Biskopsgården, Göteborg.
Xabadeyntan oo ay ku nafwaayeen labo ruux sideed kalena ku dhaawacmeen. Baaritaanka xabadeyntan oo ah kii ugu weynaa ee uu sameeyo boliska galbeedka Götaland ayaa imminka waxa uu marayaa heer gabogabo ah
Nikola ayaa ka mid ahaa dadkii maqaxida ku sugnaa habeykan xabadeynta loo geystey.
– Marka ay rasaasta nagu fureen dhulka ayaan isku tuuray. Ugu yaraan 30–50 rasaas ah ayey nagu rideen, daqiiqad kadib xabadda markey istaagtay maqaaxida waxaa qariyey qiiq, ayuu yeri Nikola.
Kadib hal sanno markii boliska ay soo gaartey wargelin degdeg ah oo oraneysa in rasaas ka dhacday qoyraha boobayaasha ah ooda looga qaadey maqaaxidan ku taala Vårväderstorg magaalada Göteborg, ayuu Robert Karlsson, madaxa baaritaanka boliska Göteborg na tusinayaa xarunta boliska ee ay ka socoto baaritaanka kiiskan.
Halkan waxaa ka socda howlo badan. Derbiyada waxaa ku dhegan sawirada hub, dad la tuhmayo iyo weliba sawiro laga soo qaadey dhiig goobo fal denbiyeedyo ay ka dhaceen.
Goobtan ayaa ah wadnaha baaritaanka. Dhinac denbe waxaa fadhiya madaxda denbi-baarista iyo shaqaale kale oo gacanta ku haya baaritaanka, ayuu yeri Robert Karlsson
Baaritaankan ayaa ah midkii ugu weynaa oo boliska galbeedka Götaland weligii sameeyo, iyadoo waraaqaha denbi-baaristan ay ka gaarayaan 9000 oo bog. Sideed ruux ayaa u xiran baaritaanka xabadeyntii hal sanno ka hor ka dhacday Vårväderstorg, iyadoo sidoo kalena baaritaanka ay ku jirto dil kale oo xabad loo adeegsaday oo ka dhacay xaafadda Hisinge, rasaaseyn iyo iskudey dil oo ka dhacday Majorna iyo weliba denbiyo la xiriira hub sharci daro ah iyo muqaadaraad.
Waa denbiyo isbiirsaday oo salka ku haya dagaal ka dhaxeeya kooxo burcad ah, sida uu yeri Robert Karlsson.
– Midda noo cadaatay baaritaankan waxay tahay dagaal burcadda u dhaxeeya oo marba dhan u janjeera, ayuu yeri.
Boliska ayaa dadaal dheer iyo maal badanba ku baxshay baaritaanka falkan, iyadoo boliska gobolka oo dhan gacan ka geysteen baaritaanka, middas oo micno weyn ku fadhida, sida ay tiri Ulrika Åberg
– Micno weyn ayey la heyd in loo helo awood dheerad ah baaritaankan. Waxay noo saamaxdey in aan baaritaanka ballaarino oo ka eegno dhinacyo badan iyo weliba dhacdooyin kale oo horey u dhacay, ayey tiri.
Ulrika Åberg waxay ka mid tahay saddex xeer illaalin oo kiiskan gacanta ku heysa. Bisha Maj gudaheeda ayaa la filayaa in ay dacwad kiiska la xiriirta ku soo ogaan shaqsiyaad gacanta boliska ku jira.
Nikola oo arkayey markii saaxiibkiis ay goobta kuwado sugnaayen xabaddu haleeshay ayaa weli waxaa maskaxdiisa ka sii guuxeysa rasaastii ka dhacaysay goryahii boobayaasha.
– Weli hurdada waa igu dhib. Sawirkii dhacdadaan mar kasta dib buu ugu soo noqdaan maskaxdeyda.
Ett år sedan dödsskjutningen på Vårväderstorget
Göteborg oo isxabadeyn weli ka socoto
Maxkamad la soo taagay rag lagu eedeeyay dilkii Vårväderstorget